Dowladda Somalia oo oggolaatay in dib loo soo celiyo 93 Soomaali Qaxooti ku ahaa Maraykanka. – Hornafrik Media Network
Dowladda Somalia ayaa aqbashay in dib loogu soo celiyo Muqdisho illaa iyo 93 Soomaali waydiistay Magangalyo Maraykanka, Waxaana Dadkani ay u badnaayeen kuwo tahriib ku galay Maraykanka iyo kuwo waqti dheer joogay oo aan haysan Sharciyo.
Sidoo kale HornAfrik waxay ogaatay inay ku jiraan Dadkan Dhalinyaro ku dhashay Maraykanka oo haystay Sharciga Maraykanka, kuwaas oo dambiyo yar yar oo ay galeen awgood loo soo tarxiilay, iyadoo aan la marsiin Maxkamadaha Dalkaasi maadaama ay yihiin Muwaadiniin Maraykanka.
Soo celinta dadkan ayaa waxaa ka shaqeeyay Wasiirka Qorshaynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah, Jamaal Maxamad Xasan oo ay saaxiib yihiin Safiirka Maraykanka u fadhiya Kenya, iyo Agaasimaha Madaxtooyadda Fahad Yaasiin oo saxiixay Warqadda dib loogu soo celinayo Qaxootigan Soomaaliya uga cararay Duruufaha Amni.
HornAfrik oo Isha ku haysay Kiiska Qaxootigan Soomaaliyeed ee la soo celinayo ayaa ogaatay in Dadkan ay ku soo wajahan yihiin 48 Saac ee soo socota Magaaladda Muqdisho, iyadoona ay wado Diyaarad Wayn oo looga soo qaaday Maraykanka. Waxayna Shirkadda iska leh Diyaaradan soo waydiisatay Hay’adda Duulista iyo Saadaasha Hawadda Ogaalanshaha Dagitaanka Diyaaradda ee Garoonka Aadan Cadde, sida uu muujinayo Email loo soo diray Hay’adda Civil Avaiton-ka oo HornAfrik ay aragtay.
Qaxootigan Soomaalidda ah ayaa lagu soo celinayaa Soomaaliya xilli ay Caalamku u aqoonsadeen Soomaaliya meel aan la isku halayn Karin Ammaankeeda, Waxayna Maraykanka laf ahaantooda Muwaadiniintooda uga digeen inay u safraan Somalia, iyadoona Somalia uu hadda Madaxwayne ka yahay Muwaadin Somali American ah.
Adoo Soomaali Ah Maxaa Saxaraha Ku Mariyey!!!.